आज घटस्थापना, के-के गरिन्छ नवरात्रीभर? | Nagarik News - Nepal Republic Media
१२ आश्विन २०७६ २२ मिनेट पाठ
काठमाडौं - प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म मनाइने नेपालीको महान् पर्व बडादसैंको पहिलो दिन आइतबार घरघरमा जमरा राखिँदै छ। दसैंको पहिलो दिन ‘शैलपुत्री’ नामकी दुर्गाभवानीको पूजा गरी घटस्थापना गर्ने र जमरा राख्ने परम्परा छ।
दसैंको पहिलो दिन नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा अथवा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजाकोठा या दसैंघरमा जमरा राखिन्छ। माटाको घट (कलश) स्थापना गरी गोबर टाँसेर जौ रोप्नुलाई जमरा राख्ने भनिन्छ। पाणिनी संस्कृत विद्यालयका पण्डित राजेन्द्र आचार्य जौको अंकुर दुर्गाभवानीको प्रिय वस्तु भएकाले घटस्थापनाका दिन राखिएको जमरा विजयादशमीको दिन दुर्गालाई चढाएर टीकासँगै ग्रहण गर्ने चलन रहेको बताउँछन्।
यस दिन ‘शैलपुत्री’ स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजाआराधना गरिन्छ। पर्वतराज हिमालयकी पुत्रीको रूपमा जन्म लिएकाले उनको नाम शैलपुत्री रहन गएको शास्त्रीय मान्यता रहेको वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. देवमणि भट्टराईको भनाइ छ। उनका अनुसार शैलपुत्रीको आराधना गर्नाले धनधान्य, सौभाग्य, आरोग्य, मोक्ष तथा सबै प्रकारका मनोकामना पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ। यस दिन दुई वर्षकी कन्यालाई ‘कुमारीदेवी’ को नामले पूजा गर्ने परम्परा छ। घटस्थापनाको शुभ साइत १० बजेर ३५ मिनेटमा रहेको पञ्चांग निर्णायक समितिले बताएको छ।
यस दिन पहिलो दिन जस्तै दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी ‘ब्रह्मचारिणी’स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजा गरिन्छ। जमराको पूजा गरी जल सिञ्चन गर्ने क्रम नवरात्रभर रहन्छ। ब्रह्माको आचरणमा रही कठोर तपस्या गरेकी र शिरमा अर्धचन्द्र तथा नाना प्रकारका आभूषण धारण गरेकी हुनाले ब्रह्मचारिणीको पूजाआराधना गरिएको मान्यता छ। उनले हिमालय कन्याको रूपमा जन्मिएर भगवान् शिवलाई पति पाऊँ भनी तपस्या गरेकी थिइन्। ब्रह्मचारिणीको आराधना गर्नाले आयु, शक्ति, भौतिक सुख तथा दाम्पत्य जीवन सुखी रहने बताइन्छ। उनलाई वैज्ञानिक दृष्टिले आकर्षण तथा चुम्बकीय शक्तिको स्वरूप मानिन्छ। यस दिन तीन वर्षकी कन्यालाई ‘त्रिमूर्ति’ देवीका रूपमा कुमारीपूजा गर्ने चलन छ। ब्रह्मचारिणीलाई विशेष रूपमा काँगियो, धागो र चोलाको कपडा चढाउनुपर्ने मान्यता छ।
यस दिन ‘कुष्माण्डा’स्वरूपा दुर्गा भवानीको पूजाआराधना गरिन्छ। देवी भागवतका अनुसार ब्रह्माण्डको उत्पत्तिपूर्व देवी कुष्माण्डाले आफ्नो हास्यबाट ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरेकी थिइन्, तसर्थ उनलाई साक्षात् आदिशक्ति मानिन्छ। माता कुष्माण्डाको भक्तिले रोग, शोक नष्ट भई आयु, यश र बलको वृद्धि हुने मान्यता रहेको छ। कुष्माण्डालाई वैज्ञानिक दृष्टिले सम्पूर्ण रासायनिक शक्तिको स्वरूप मानिन्छ। यस दिन पाँच वर्षकी कन्यालाई ‘रोहिणी’ नामले पूजा गर्ने र कुष्माण्डा देवीलाई विशेष रूपमा कचौरामा मधुपर्क (मह र दही) चढाउने विधि छ।
यस दिन ‘कात्यायनी’स्वरूपा नवदुर्गा भवानीको पूजाआराधना गरिन्छ। पौराणिक मान्यताअनुसार ‘कत’ नामका महर्षिका पुत्र कात्य भए र तिनै कात्यको गोत्रमा प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन जन्मिए। कात्यायनले घोर तपस्या गरी जन्माएकी पुत्री कात्यायनी देवीका नामले प्रसिद्ध भइन्। महिषासुर वध गरेकाले उनी महिषासुरमर्दिनी नामले पनि चिनिन्छिन्। भगवान् श्रीकृष्णलाई पतिका रूपमा पाउन ब्रजका गोपिनीले उनै कात्यायनी देवीको आराधना गरेका थिए। कात्यायनी देवीको पूजापाठको प्रभावले अविवाहिताको यथाशीघ्र विवाह हुने र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्त गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता छ। कात्यायनी देवीलाई वैज्ञानिक दृष्टिले ब्रह्माण्डीय सम्पूर्ण केन्द्र शक्तिको स्वरूप मानिन्छ। यस दिन सात वर्षकी कन्यालाई ‘चण्डिका’ नामले पूजा गरिन्छ र विशेष रूपमा उनलाई अलंकार वा गरगहना चढाइन्छ।
छोरीमान्छेलाई भनिने मन्त्र ः
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०६:३८ आइतबार